Kodzero-dzevanhu, 30 Chikunguru 2019
Chipiri 30 Chikunguru 2019
Mumwe Mukuru weKambani Inotenga Fodya Otarisirwa Kuomeserwa neParamende
Mumwe mukuru wekambani yePremier Tobacco Auction Floors, VaPhilemon Mangena, vave panyanga dzamushore nedare reparemende mushure mekuendesa kumatare edzimhosva kwavakaita vamwe vaimbove vashandi vekambani iyi vakapa humbowo kuparamende pamusoro pehuwori hwaitwa mukambani iyi pakutengeswa kwefodya.
Vanhu Vochema Zvikuru neMutengo weMafuta
Vatyairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzomitokari pamwe nemari dzekupaka motokari dzavo mudhorobha reHarare.
Dare Rorerutsa Zvishoma Vanorwira Kodzero Dzevanhu Vari Kupomerwa Mhosva yeKuda Kupidigura Hurumende
Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarerutsira zvishoma hurongwa hwekunozvipira kumapurisa kwevanorwira kodzero dzevanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Amai Nzenza Vanoti Havana Kupihwa Mari yeChiokomuhomwe naAmai Mupfumira
National Social Security Authority, kana kuti NSSA yavimbisa zvekare kuburitsa gwaro rinoratidza huori hunonzi hwakaitika kukambani iyi raunza mutauro munyika.
Zimbabwe Book Fair yeGore Rino Yotanga muHarare
Zimbabwe International Book Fair, ZIBF, inovhurwa nhasi muHarare paine kurudziro kuvanyori kuti vanyore mabhuku anoratidza nekubudisa zviri kuitika nguva ino sezvaiita vanyori vakare.
Varairidzi Vasiri Kuenda kuMabasa Voti Vari Kuvhundutsirwa
Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymond majongwe vanoti sangano ravo riri kuwana zvinyunyuto izvi kubva kumatunhu anoti Chikomba, Mudzi, Mutoko ne Murehwa kuMashonaland East, Chipinge kuManicaland neku Gwanda mudunhu reMatabeleland South.
Vakatengeserwa Nzvimbo dzeKuvakira muChinhoyi Vanonyunyuta kuKomisheni
Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vadzivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa, asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi huori.
Amai Mupfumira Vovharirwa Mujeri kweMazuva Makumi Maviri neRimwe Chete
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Prisca Mupfumira, vachagara mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe mushure mekunge mutongi wedare atambira gwaro remuchuchisi mukuru wehurumende rekuti vagare muchizarira panguva iyi mhosva dzavari kupomerwa dzekuitwa zvehuori dzinenge dzichiferefetwa.
Pane Zvakawanda Zvinofanirwa Kuitwa Kuitira Kuti Zimbabwe Iremekedzwe Munyaya dzeSarudzo
Masangano ekuAmerica eInternational Republican Institute neNational Democratic Institute, ayo akaongorora sarudzo gore rapfuura, anoti kunyange hazvo paine shanduko yave kuitika munyaya dzematongerwo enyika nekuvandudzwa kwemutemo zvichitevera sarudzo idzi, pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuitira
VaChamisa vanoti vari kukurudzira kuti kubva nemusi weMuvhuro 29 Chikunguru kusvika musi weSvondo 4 Nyamavhuvhu, pakati penguva dza 1 na 2 masikati vanhu vasimudze maoko avo vachinamata, vachipira mwoyo yavo kuna Mwari vachimukumbira kuti avape simba, huchenjeri, uye kuvachengetedza.